::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather ओमानमा सिस्नुपानीको ‘दुई थोपा हासो’:: Rojgar Manch ::
ओमानमा सिस्नुपानीको ‘दुई थोपा हासो’
मंगलवार, २०७४ फाल्गुन ०७ गते ०२:५५
पि.बि श्रेष्ठ, मस्कट / सिस्नुपानी नेपाल तथा गैरआवासीय नेपाली सोसल क्लव ओमानको आयोजना तथा नेपाली राजदुतावासको संयोजनमा ओमानका बिभिन्न तिन स्थानमा सिस्नुपानी नेपालले आङ्खनो प्रस्तुती प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार बिहान ओमान आईपुगेको सिस्नुपानी नेपालका कलाकार टिमले शुक्रबार ओमानको बर्का र बादिकबिरमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो भने शनिवार सतिअल कुरुममा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।
सिस्नुपानी नेपालका कलाकारहरु मनोज गजुरेल, टंक आर्चाय, अर्जून पराजुली, लम्मण गाम्नागे र डा. रबिन्द्र समिर गरि ५ जनाको टोली युएई तथा बहराईनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ओमान आएको थियो । शुक्रबार आयोजना भएको पहिलो कार्यक्रम बर्कास्थित होटल फुडहाउसको हलमा भएको थियो भने दोश्रो कार्यक्रम बादिकबिरमा रहेको होटल पायोनियरमा सम्पन्न भएको थियो ।
शनिबार भएको कार्यक्रम भने नेपाली राजदुतावासको निवासस्थित हलमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाली दुतावास ओमान परिवार तथा ओमानमा रहेका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँगै अन्य नेपालीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घोषण गर्दे सिस्नुपानी नेपालका कलाकार टंक आर्चायले बिभिन्न जोक, चुड्किला र समय परिवेशका घटनाहरुलाई व्यङ्गात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै नेपालको वस्तुस्थिती र प्रवासी जीवनको बारेमा व्यङ्गात्मक कबितामार्फत अर्जुन पराजुलीले कार्यक्रमलाई रोचक बनाएका थिए । यस्तै कार्यक्रममा श्रमशिल जिवनको विषयमा लक्ष्मण गाम्नागे र स्वास्थ्यको विषयमा डा. रविन्द्र समिरले विभिन्न जानकारीहरु प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुका रुपमा रहेका मनोज गजुरेलले गजुरियल प्रस्तुतीहरु प्रस्तुत गर्दै सहभागी सबैलाई पेट मिचिमिचि हास्न बाध्य बनाएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाली राजदुतावास ओमानकी राजदुत शर्मिला पराजुली ढकालले सिस्नुपानी नेपाललाई धन्यवाद दिएकी थिइन भने एनआरएन सोसल क्लव ओमानका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले कार्यक्रमको सहयोगी संघ– संस्थाहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।